Aalkolo, tubaakada iyo daroogada - Reproduktiv Livsplan
Bacmirinta iyo caafimaadka
Caafimaad iyo bey’ada
Cuntada iyo jimicsiga
Aalkolo, tubaakada iyo daroogada
Cudurada galmada lagu kala qaado
Cawinida aad uurka ku yeelan karto
Iska ilaalinta uurka
Tijaabi aqoonta aad u leedahay bacriminta
Qorshahaada taranka noolashaada
Ma doonaysaa inaad wax ka badan ogaato?
Iska ilaali aalkolo, tubaako iyo daroogo haddii adiga ama lammaanahaagu isku dayaysaan in aad uur qaado iyo inta aad uurka leedahay.
Cabbitaanka khamriga iyo muddada dheer wuxuuna saameyn ku yeelan karaa ugxaan daadashada dumarka, dhaawici karaa xiniinyaha ragga wuxuuna saameeyaa abuurista shahwada si isbeddelka DNA u dhaco.
Inta lagu jiro toddobaadka ugu horreeya ee uurka, aalkoladu waxay yeelan kartaa saameyn waxyeello ku ah kobcida uurjiifta haddii haweenay uur leh ay cabto khamriga. Aalkoladu inta lagu jiro uurka waxay kordhisaa suurtagalnimada naafonimada, dhiciska, miisaanka dhalmada oo hooseeya iyo kororka khatarta dhaawac maskaxda. Maadaama uusan cidna ogayn xaddiga ku saabsan inta aalkoladu uu u keeni karo ilmaha, ikhtiyaarka ugu wanaagsani maaha in la cabbo aalkolada uurka ka hor iyo inta uurka lagu jiro.
Sigaar-cabiddu waxay sii adkeysaa inaad uur yeelato oo ilmo dhasho. Sigaar-cabiddu waxay waxyeello u geysataa hiddo-sidada gudaha ugxaanta iyo weliba waxyaabo kale oo waxyeelleeyo soo saarka hoormoonka iyo xuubka ilmo-galeenka, taasoo ka dhigaysa mid sii adkeyneysa in ugxaanta bacrimintay gees ku dhagto. Lakabka ugxaanta ayaa si xowli ah hoos u dhacaya ay leeyihiin haweenka sigaarka cabba. Sigaar-cabbayaashu waxay ku qaadataa labo jibaar si ay uur qaadaan marka loo eego kuwa aan sigaarka cabbin. Xitaa cabbista haashka ayaa hoos u dhigaya suurtogalnimada inaad uur yeelato. Awoodda in aad uur yeelatid ayaa wanaagsanaanayso haddii aad joojiso sigaar-cabidda.
Sigaar-cabiddu waxay sidoo kale saameysaa bacriminta ragga. Nikotiinka wuxuu isku geeyaa xididdada dhiigga iyo murqaha. Wuxuu horseedi karaa kacsi la’aan ku dhacda ragga. Ragga isticmaala tubaakada ayaa sidoo kale leh shahwo yar iyo oo waxyeello qabta; waxay leeyihiin muuqaal sii liidanaya aadna uma socsocon karaan, taas oo ka dhigaysa bacriminta mid adag.
Isticmaalka tubaakada waxay saameysaa fayo-qabka uur-jiifka xilliga uurka iyo sidoo kale caafimaadka cunugga dhalashada kadib. Waxyaabaha kale, isticmaalka sigaarka/tubaakada keenaanbayaa ah yaraanta hawada oksijiinka tagta mandheerta oo leh halis dheeraad ah ee dhiciska, ilmuhu in uusan u korin sida la rabo, dhalmada dhicis ama dhimashada uurjiifka. Carruurta ay dhalaan hooyooyinka sigaarka-cabbo miisaankoodu wuu ka fududyahay marka la dhalo wayna u nugul yihiin inay xanuunsadaan marka la eego carruurta hooyooyinkooda aan sigaarka cabbin. Cunugga caadada looga dhigo cabbista haashka ayaa wuxuu halis dheeraad u ah cillada dhimashada lamafilaanka ah ee dhallaanka. Carruurta ku nool guryaha dadka sigaarka cabbaa joogaan ay u nugul inay yeeshaan xasaasiyad, neefta, iyo caabuqa dhegaha iyo neef-mareenka.
Way adag tahay inaad si iskaa ah u joojiso cabbitaanka khamrada, sigaar-cabidda ama isticmaalka tubaakada haddii lamaanahaaga sii wado. Haddii aad qorsheyneyso inaad ilmo la yeelato qof kale, ka faa’idayso fursada si aad wadajir ugu joojisaan. Haddii aad qaadato daroogo waa inaad joojisaa inta aadan isku dayin inaad uur yeelato. Daroogadu waxay saameyn xun ku yeelaneysaa fursadahaaga uur yeelashada iyo caafimaadka ilmahaaga iyo adiga. Si aad u awood ugu yeelato noqoshada waalid wanaagsan, waxaa ugu horeya oo muhiim ah inaad awood u leedahay la qabshada nolosha aan daroogo lahayn. Waxaa jira xarumo khaas ah halkaas oo shaqaalaha la tababaray oo ay khibrad u leeyihiin la kulanka bani’aadamka iyagoo kale ah ee qaba dhibaatooyinka daroogada.
« dib u noqo kan ku xiga »
Ku saabsan shabakada